युद्ध राज्य चाहन्छ, हामीले चाहेको होइन – महासचिव विप्लव – eratokhabar
युद्ध राज्य चाहन्छ, हामीले चाहेको होइन – महासचिव विप्लव
२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार ०७:२३ September 15, 2019 ई-रातो खबर
देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सवभन्दा पहिले म रातो खबरलाई धन्यवाद दिन्छु । तपाईंहरूले महत्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो । पहिलो कुरा सङ्घीय गणतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भन्ने चर्चा चलाइएको छ । दोस्रो कुरा यसको विकल्पका बारेमा बहस सुरु भएको छ । तेस्रो कुरा हाम्रो पार्टीको विश्लेषणका बारेमा पनि छलफल चलेको छ । यो एकदम सही कुरा हो । यसमा पहिलो कुरा नेपाली जनतालाई एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भनेर जो कुरा लेखिँदै थियो त्यतिबेला नै हामीले के भनेका थियौँ भने नेपालको बहस कानुनको होइन, सत्ताको हुनुपर्दछ । सत्तामा पुरानै वर्गको प्रभुत्व र अधिनायकत्व कायम राखेर संविधानद्वारा जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन बहस चलाइयो त्योचाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गहरू, दलाल संसद्वादीहरूले चलाएको कृत्रिम र ढोङ्गी प्रचार थियो । हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौँ– यो तरिकाले देशले निकास पनि पाउँदैन, जनताले समृद्धि पनि पाउँदैनन् र यो प्रणाली सफल पनि हुँदैन । जनताले चाहेको आमूल परिवर्तन हो, जीवनमा परिवर्तन हो । राष्ट्रको भविष्यमा परिवर्तन हो । यो कुरा जनताको सङ्घीय गणतन्त्र भन्नेबाट सम्भव छैन । किन छैन भने मूलतः यो सङ्घीय भने पनि यो त एउटा विशेषणजस्तो मात्र हो तर यो गणतन्त्र भनेको पँुजीवादी गणतन्त्र हो । यो गणतन्त्र सच्चा देशभक्त र श्रमिक जनताका विरुद्धको गणतन्त्र हो । यसले सारमा मुठीभर मालिक र नेपालको सन्दर्भमा दलाल वर्गको सेवा गर्दछ । यो व्यवस्थाले जनतालाई शान्ति र समृद्ध भविश्य केही पनि दिन सक्दैन । देशलाई नयाँ जीवन पनि दिन सक्दैन भनेर नै त्यतिबेला हामीले यो संविधानको विरोध गरेका थियौँ र खारेजीको माग गरेका थियौँ । जनताको जनवादी संविधान, वैज्ञानिक संविधान आवश्यक छ । त्यसमा बहस गराैँ भनेर हामीले यो संविधान ल्याउने षड्यन्त्र चल्दै गर्दा चार वर्षअगाडि नै हामीले भनेका थियौँ । हाम्रो विश्लेषण सही साबित भयो । हाम्रो विश्लेषण मात्र नभनौँ वास्तविक कुरा जे थियो अहिले त्यही कुरा देखापरेको हो । त्यो भनेको नेपाली जनताले जुन वर्गका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे फेरि त्यही वर्ग आउने थियो । त्यो भनेको मुठीभर लुटेरा वर्गको रक्षा गर्ने, स्वार्थको संरक्षण गर्ने र नेपाली जनतालाई फेरि पनि शोषण गर्ने, देशमा असमान सन्धिसम्झौता लाद्ने यही हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले त्यतिबेलै भनेको के हो भने पुँजीवादी गणतन्त्र होइन, वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र । हिजो हामीले के भनेका थियाैँ भने राजतन्त्र र दलाल संसद्वादी व्यवस्था हुँदाखेरि नयाँ जनवादी गणतन्त्रको संविधान आवश्यक छ भनेका थियौँ आज त्यो समय पनि अगाडि बढिसक्यो । आज हामीले के भनेका छौँ भने पुँजीवादी गणतन्त्रको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक छ । वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्रको संविधान आउने गरी नलडेसम्म जनताले न शान्ति पाउँछन्, न समृद्धि पाउँछन् । यो एउटा पुष्टि हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।
मैले विभिन्न अन्तर्वार्ता र लेखहरूमा पनि भनेको छु । विश्लेषणहरूमा पनि हेरिरहेको छु । बुद्धिजीवी साथीहरूले हामीलाई वार्तामा आउनका लागि र शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा आएर आन्दोलन गर्न र जनताका मुद्दा उठाएर अघि बढ्नका लागि भन्नुभएको छ । अर्को कुरा, नेपालमा एउटा विकल्प आवश्यक छ तर त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाले भैदिए हुन्थ्यो । नेपालमा अन्य पार्टीहरू असफल भएर गए । यसको विकल्प प्रत्यक्ष सतहमा आएको भए हुने थियो भन्ने कुरा पनि उठेको छ । यसको हामी स्वागत गर्दछौँ, कदर गर्दछाैँ र सँगै के कुरा स्पस्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामी त शान्तिमै थियौँ नि । हामीले युद्धको घोषणा गरेको कुरा हो र ? हाम्रो देशका प्राकृतिक सम्पदाहरूमा लुट नमच्चाऊ, कमिसनको लोभमा देशका स्रोतसाधन नबेच, नलुट भनेको हो । सिमानामा स्वतस्फूर्त रूपमा जनता गएर लडेका छन् । स्तस्फूर्त रूपमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध जनता उत्रिएको त हामीले देखेकै छौँ नि । हामीले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको कुरा हो । जनताले तिरेको राजस्वमा लुटपाट नगर, राज्यको सम्पत्ति लुटेर व्यक्तिको खातामा जम्मा नगर । जनताको पैसालाई निजी बैङ्कमा नथुपार । विदेशमा नलैजाऊ भनेको हो । विदेशी कम्पनीबाट नेपाली जनतालाई लुट्न नदेऊ । विदेशी कम्पनीलाई अर्बौं रकम लुटेर खान नदेऊ । यो जनताको भावनाको कुरा हो । हामीले भनेको यही हो । यो भन्दा हामीले जनताका तर्फबाट कारबाही पनि गर्यौँ । कारबाही मात्र होइन, कैयौँ मान्छेहरूलाई त फाँसी दिनुपर्दछ भनेर त जनताले सडकमै भनिरहेका छन् नि । राष्ट्रघातीहरूलाई सिध्याउनुपर्दछ भनेर त जनताले सडकमै भनिरहेका छन् नि । हामीले सिध्याएका त छैनौँ । हामीले त केही प्रतिनिधिमूलक कारबाही गरेको कुरा सही हो, हामीले भनेकै छौँ । हामीले चारपाँचवटा प्वाइन्टमा कारबाही गरेकै हो । अहिले पनि गर्छौं । हामीले अरुण तेस्रो र अपर कर्णालीमा पनि कारबाही गरेकै हो । हामी गर्दछाैँ । नेपालको हितविपरीत गरिएको कोसी हाइड्याममा हामीले कारबाही गरेको हो, हामी गर्दछौँ र त्यसलाई सफल हुन दिँदैनाैँ भनेकै छौँ । सबैलाई म भन्दिनँ, मानव बेचबिखन गर्ने कैयौँ मेनपावर कम्पनीहरू जसले हाम्रा हजारौँ दिदीबहिनीहरूलाई वेश्यालयमा बेचिरहेका छन् । सडकमा वस्तु बेचेको जस्तो बेच्नेमाथि कारबाही गरेकै हो । म जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने जनताको भावनाअनुसार हामीले कारबाही गरेको हो । यो युद्ध हो र ? राज्य के भन्छ भने हामी लुटपाट गर्दछाैँ तिमी सहेर बस, हामी देश बेच्छौँ सहेर बस भन्छ । अर्बौं–खर्बौं भ्रष्टाचार गर्दछ । हैन यो लुटपाट गर्ने, देश बेच्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा युद्ध हो ? हामीले जनताको चाहनाअनुसार केही प्रतिवाद गर्ने कुरा युद्ध हो ? जनताको भावनाअनुसारको काम गर्दा हामीमाथि किन प्रतिबन्ध ? युद्ध राज्य चाहन्छ, हामीले चाहेको होइन । हामी जनभावनाअनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले जान तयार छौँ, के राज्य तयार छ ? रत्नपार्कमा कुर्सी राखेर आम जतनालाई हामी बहस गर्न तयारै छौँ नि के राज्य तयार छ ? तर राज्य आफ्नो मुकुन्डो छोप्नका लागि हाम्रा राजनीतिक माग हरू लिएर जनतामा जानै नदिएर दमन गरेको छ । यो भनेको राज्यसत्ताको दुरूपयोग, राज्यसत्ताको अधिनायकत्व र प्रभुत्व देखाउन र दमन लादेको कुरा हो नि । यसले गर्दा हामीले शान्ति नचाहेको, युद्धमा गएको भन्ने कुरा सही होइन । तपाईंहरूले राज्यलाई कर नतिर्ने एनसेलको भ्रष्टाचारका विरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ । सर्वोच्चमा एनसेलको कर छली सम्बन्धी मुदा विचाराधिन थियो । त्यो मुदामा सर्वोच्चले पुरानो निर्णय उल्ट्याइदिएको छ र राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने गरी एनसेलका पक्षमा फैसला गरेको छ ।
एनसे लको भ्रष्टाचारका विरुद्ध कारबाही गर्ने पार्टीका नाताले यसका विषयमा केही सोच्नुभएको छ कि छैन ?
यो निकै गम्भीर प्रकृतिको घटना छ । जनताले दिनदिनै आवाज उठाएका छन् । म सुन्छु– विज्ञ, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूका कुरा सुन्छु । ठाडो रूपमै एनसेलले गरेको बदमासीमा राज्य झुकेको विषयमा बुद्धिजीवीहरू बोलेको सुन्छौँ । भर्खरै मैले महालेखा परीक्षकका रिटायर अफिसरले बोलेको सुनेँ । यस्तै थुपै्र कानुनविद्हरू, बुद्धिजीवीहरू पनि बोलिरहनुभएकै छ । एउटा स्वतन्त्र नागरिले यत्रो चिन्ता गर्दछ । बाहिर बस्ने नागरिकले देशको सम्पत्तिका बारेमा चिन्ता गर्दछ । एनसेलले एक खर्बजस्तो राज्यको पैसा लुटेको छ । तर लज्जाको विषय के छ भने न काङ्ग्रेस, एमाले, माके र समाजवादी पार्टी बोल्छन्, न त तिनीहरूका नेता बोल्छन्, कोही पनि बोल्दैनन् किनभने सबैको मुखमा मुखौरो लगाइदिएका छन् । यो कुरा जनताले, आमनागरिकले बुझ्नुपर्यो नि त । यो गम्भीर प्रश्न हो । देशलाई खुलेआम रूपले लुटपाट गर्दा पनि देश चलाउँछौँ भनेर वसेका पार्टीहरू किन बोल्दैनन् ? अमूर्त र अनेकौँ डङ्का ठोक्दै हिँड्ने ! म भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ, गर्दा पनि गर्दिनँ भन्ने मान्छेले के हेरेर बसेका छन् ? शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी चाहियो भन्ने नेताहरूले के हेरेर बसेका छन् ? अनि लोकतन्त्रको दुहाई दिने काङ्ग्रेसले के हेरेर बसेको छ ? यसबाट के बुझिन्छ भने सबै नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भन्ने कुरा यसले साबित गर्दछ । काङ्ग्रेस, पूर्वएमाले– माओवादी केन्द्रका प्रायः नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । अरू पनि सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्नु पर्दछ । अब यो व्यवस्था नै सडेगलेको हो, यो व्यवस्थामा बसेर काम गर्ने व्यक्ति र पार्टी सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् र कोहीले केही गर्नेवाला छैन । यो व्यवस्था सडेगलेको थोत्रो व्यवस्था हो, लुटपाट गर्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ– एनसेलको कर यो राज्यले तिराउँछ कि तिराउँदैन ? ७५ अर्ब कर तिराउने भनी पहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणको नेतृत्वमा गरेको फैसला हो । फेरि कहाँबाट यी ‘भुइँफुट्टा’ न्यायाधीशहरू जन्मिए ! उनीहरूले फेरि एकाएक एनसेलका पक्षमा अर्बौं कर छूट दिने फैसला गरे ? त्यसैले हामीले भनेका छौँ– राज्यसत्ता नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेपछि त्यसका अङ्गहरू लाचार छायाँ बन्दारहेछन् भन्ने साबित भएको छ । म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्दिनँ, कोही राम्रा न्यायाधीशहरू पनि छन् । हाम्रो पार्टी निकटका विद्यार्थी नेताहरूसँग चार लाखसम्म धरौटी मागिएको छ । काठमाडौँको एउटा कलेजमा जुलुस निकालेबापत चार लाख धरौटी मागिएको छ । तीन लाख, एक लाख धरौटी मागिएको छ । विद्यार्थीले यो कसरी तिर्छ ? उसो भए त भ्रष्टाचारका विषयमा कोही बोल्न पनि नसक्ने भयो त ! एउटा युवा एउटा विद्यार्थीले देशलाई परेको घाटाका बारेमा बोल्दाखेरि यत्रो धरौटी तोक्छ तर यत्रो एकएक खर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने एनसेललाई छूट दिन्छ ! यो त सबैले नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा हो । त्यसैले चुप लागेर बस्न, हुन्न ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा कार्ल माक्र्सले आयरल्यान्डको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुभयो र आइरिस जनताहरूले स्वतन्त्रता पाउनुपर्दछ भनेर बोल्नुभयो । लेनिनले पूर्वीय देशहरूमा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन हुँदा त्यसको समर्थन गर्नुभयो । माओले पनि त्यही गर्नुभयो तर अहिले कास्मिरी जनतामाथि भारतले गरेको ज्यादतीका विषयमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूबाट त्यति आवाज आएको देखिँदैन । एकप्रकारले उनीहरू एक्लोजस्तो पनि देखिन्छन् । कास्मिरमा गरिएको भारतीय ज्यादतीका विषयमा, कास्मिरका विषयमा पार्टीको धारणा के छ ?
निकै व्यस्तता र चुनौतीको बीचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो । धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।
रातो खबर आजको नेपालमा परिवर्तनको संवाहक हो । यसबाट हाम्रो पार्टीका धारणाहरू जनताका बीचमा पुर्याउने अवसर दिनुभएको छ । यसका लागि तपाईंहरुको टिमलाई पार्टीका तर्फबाट धेरैधेरै धन्यवाद दिन्छु ।
२०७६ भदौ २७ गते शुक्रबार प्रकाशित
bannerNews, bichar, Interview, mukhya, mukhyaBisesh, news, politics
← रौतहटमा युवा संगठन नेपालको भेला सम्पन्न
मुलुकभर मौसममा बदली, सतर्कता अपनाउन अनुरोध →